कोरोना भाइरसः कुन देशमा कति पुग्यो संक्रमितको संख्या ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको विश्वभर संख्या २ लाख नाघेको छ । बिहीबार विहानसम्म विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमितहरुको संख्या २ लाख १९ हजार पुगेको छ ।
सिड्नी । कोरोना भाइरसको कहर विश्वभर मच्चिरहेको छ । कोरोनाकै कारण धेरै देशले विभिन्न विशेष कार्यक्रम पनि स्थगित गरिसकेका छन् । भाइरसले हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुलाई पनि संक्रमित बनाएकोछ । अष्ट्रेलियाको गृहमन्त्री पिटर डटन पनि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् ।
यी देशहरुमा कोरोना भाइरसको कहर, यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
एजेन्सी । कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म विश्वभर ४९८४ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै झण्डै १ लाख ३५ हजार भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । पछिल्लो मिडिया रिपोर्ट अनुसार ७० हजारभन्दा बढी उपचारपछि ठीक भएर घर फर्किएका छन् । पछिल्लो समय सबैभन्दा ठुलो महामारी इटालीमा देखिएको छ । इटालीमा भाइरस कारण १०१६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
इटालीमा कोरोनाले लियो ८२७ जनाको ज्यान
एजेन्सी । इटालीमा कोरोना भाइरसका कारण ८२७ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमितहरुको संख्या १२४६२ पुगेको छ । स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि इटाली सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय नै लिन बाध्य भएको थियो ।
कोरोना भाइरसः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
एजेन्सी । कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण ४ हजार भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको फ्रान्सेली समाचार संस्था एएफपीले मङ्गलबार जनाएको छ । यस भाइरसबाट एक लाख १४ हजार ४५८ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यसमध्ये ६४ हजार १२० जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कोरोना भाइरसबारे बजारमा चलेका १० हल्लाहरु ?
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसको कहर मच्चिरहेको छ । हालसम्म विश्वभर ३८३१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै १ लाख १० हजारभन्दा बढी यो भाइरसबाट संक्रमति भएका छन् ।
कोरोना भाइरसबाट इटालीमा १४८ जनाको मृत्यु
काठमाडौँ । इटालीमा कोरोना भाइरसबाट १४८ जनाको ज्याान गएको प्राप्त पछिल्लो समाचारमा जनाइएको छ । इटालीमा बिहीबारमात्र ४१ जनाको मृत्यु भएको समाचार आएको छ । यो समेतगरी यहाँ यस भाइरसको प्रकोपबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १४८ पुगेको हो ।
यौनसम्पर्कबाट कोरोना भाइरस सर्छ वा सर्दैन ? के भन्छन् विज्ञहरु
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसको कहर रहेको छ । हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण ३२०४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्यस्तै ९० हजारभन्दा बढी यो भाइरसबाट संक्रमित भएका छन् । कोरोना भाइरस कसरी सर्छ हालसम्म पनि यसबारे निश्चित रिपोर्ट आउन सकेको छ ।
विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ३२०३ जनाको मृत्यु
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म ३२०३ जनाको मृत्यु भएको छ । चीनमा २९८१, इटालीमा ७९, इरानमा ७७, दक्षिण कोरियामा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
कोरोना भाइसः यस्तो छ पछिल्लो अपडेट
एजेन्सी । चीनमा थप ४२ जनाको ज्यान गएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण विश्वभरि मृत्यु हुने मानिसको सङ्ख्या ३ हजार नाघेको सोमबार जनाइएको छ ।